धनुषाबाट बस चढेर कञ्चनपुर पुगेका सशस्त्रका प्रहरी हवल्दारलाई हाकीमले फोन गरेर भने, ‘भाई तिमीलाई कोरोना पुष्टि भयो’ – NepalajaMedia
August 8, 2020 787
काठमाडौं । एक जना सशस्त्र प्रहरीका हवल्दाल धनुषावाट महेन्द्रनगर सम्म सार्वजनिक बस चढेर पुगेपछि उनलाई कोरोना पुष्टि भएको खुलेको छ । धनुषा स्थित सशस्त्र प्रहरी गणमा कार्यरत एक सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ हवल्दार सार्वजनिक बसमा चढेर कञ्चनपुर पुगेपछि उनलाई कोरोना पुष्टि भएको खुलेको हो ।
बैतडीको सुरनैया गाउँपालिका घर भएका ती हवल्दार बिदा मनाउन सार्वजनिक बस चढेर धनुषावाट गएका थिए । उनले धनुषाबाट कैलालीको अत्तरियासम्म बसमा र त्यहाँबाट महेन्द्रनगरसम्म वीङगरमा यात्रा गरेको बताएका छन् । महेन्द्रनगरबाट सीमा बजार गड्डाचौकी जाने क्रममा भुजेला पुल नजिक पुग्दा उनलाई कार्यालयवाट फोन आयो । फोन उनका हाकिमले गरेका थिए । हाकीमले उनलाई फोनमा भने, ‘भाई तिम्रो रिर्पोटमा कोरोना पोजेटिभ देखियो’। धनुषा गणमै छदा २० साउनमा उनको स्वाब संकलन गरीएको भएपनि उनी त्यसको परिणाम नआउँदै घर हिडेका थिए ।
स्रोतका अनुसार अत्तरियाबाट बैतडी जाने गाडी नपाएपछि उनी भारतीय मार्ग भएर घर जान गड्डाचौकी पुगेका थिए। कोरोना भएको पुष्टि भएपछि उनलाई राति १२ बजेतिर महाकाली अस्पत्तालको आइसोलेसन केन्द्रमा भर्ना गराएको छ। सार्बजनिक बस चढेर लामो यात्रा गरेकाले उनको सम्पर्कमा धेरै यात्रु आएको अनुमान गरिएको छ। अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम चलिरहेको प्रहरीले जनायो।
Nextकेरला विमान दुर्घटना : मृत्यु हुनेकाे संख्या १८ पुग्याे, एक मृतकमा काेराेना पाेजिटिभ !
चिनियाँ सेनाले भारतीयलाई कब्जामा लिएको आरोप
इतिहासमै पहिलो पटक बेल्जियमको नगरपालिका सदस्यमा नेपाली मुलका क्षेत्री निर्वाचित!
नेपालमा पहिलोपटक एकै दिन कोरोनाले छ जनाको मृत्यु (1263)